Nhau - Hengxing akapinda muchikamu chema53 CHINA INTERNATIONAL BEAUTY EXPO
Iyo Exhibition ndiyo hombe runako inoratidzira muChina, muunganidzwa wemachini, kurongedza zvinhu, zvemunhu zvekuchengetedza zvigadzirwa, Professional runako zvigadzirwa, zvigadzirwa, Hutano Kuchengetwa zvichingodaro.
Iyo Hengxing michina yakanyatsogadzirirwa, ine yakanakisa nhanho yehunyanzvi, yepamusoro-kuita; iwo akateedzana ultrasonic chubhu yekuisa chisimbiso michina zvakare zvakare ive huru inosimbisa muchiratidziro. Dhizaini dhizaini uye yakanaka yekuisa chisimbiso mhedzisiro yezvakasiyana zvinhu, yakwezva vazhinji vepamusha nevatorwa vezvemabhizinesi vakaungana kuzotarisa uye kubvunza kuti vakurukure. Vatengi vazhinji vakaunza matambudziko ehunyanzvi akasangana mukugadzirisa chiitiko, mushure mekusanganisa makore gumi ruzivo mainjiniya kutungamira uye kugadzirisa maitiro, huwandu hwekugutsikana kwevatengi, saiti iyi yakasvika pakutenga chinangwa.
Iko kushanya kwekukohwa. Chiratidziro, chakatengesa ese hengxing michina yekuratidzira michina, Semuenzaniso mutengi wedu weVietnam akarongeka imwe seti ultrasonic chubhu yekuzadza chisimbiso muchina pakuratidzira, uye isu zvakare takadzosa yakawanda yakawanda mazano kubva kumagumo vashandisi uye vatengesi anokosha.
Henxging Machinery michina muiyo ultrasonic chubhu yekuvhara michina indasitiri yagadzira-refu-kukura uye kubudirira mumakore apfuura. kune imwe mhando yechiratidzo, kuvandudza ruzha. Nekwaniso yakanaka yekutengesa hunyanzvi, Kunyangwe isu tine mumunda weiyo ultrasonic yekuisa chisimbiso michina inotora yakakosha chinzvimbo. asi tinoziva zvakare kuti "nzira refu inoda kufamba. Isu tichaenderera mberi nekuvandudza manejimendi manejimendi, kumhanyisa Hengxing muchina wekumaka maitiro, zvine musoro kumeso kumusika kudiwa, ichigadzira mhando yemhando muchina uye sevhisi kune vatengi uye shamwari.